Home Wararka Maleeshiyo beeleed ku dagaalay Galgaduud iyo khasaare ka dhashay
Maleeshiyo beeleed ku dagaalay Galgaduud iyo khasaare ka dhashay
Wararka ka imaanaya deegaanka Haraale oo ka mid ah deegaanada hoos taga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu dhexmaray laba Maleeshiyo beeleed oo walaalo ah.
Dagaalka dhexmaray labada Maleeshiyo beeleed oo ahaa Xoolo dhaqato ayaa la sheegay inuu ka bilaawday arrimo la xariiray dhul daaqsimeed sababay inuu dhaco dagaalkan khasaaraha geystay ee dhexmaray labada beelood.
Inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ku dhintay ilaa lix ruux, waxaana ku dhaawacmay sideed ruux oo kale, kuwaaas oo dhaawacyadooda lakala geeyay magaaloyinka Balanbale iyo Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Dadka ku nool deegaanka Haraale waxa ay sheegeen in dagaalkaan uu yahay mid kusoo noqnoqday deegaanka, waxaana dhowrkii sano ee la soo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Galgaduud iyo Mudug ka dhacay dagaal beeleedyo u dhaxeeyay Maleshiyaad wada dega deegaanada gobolka Galgaduud.
Previous articleGuddiga Doorashada heer Federaal oo amaanay boobkii shalay ka dhacay Jowhar
Next articleFarmaajo oo qorsheynaya in uu doorasho 16 kursi ah ku qabto Garbahaareey
Yamamoto oo ku fashilmay Itoobiya, hadana fashiliyay Siyaasadda Soomaaliya
Beesha caalamka oo ku baraarugay walaaca doorashada somalia 2021